E-News Nepali || Fast and Accuracy » युरोप युरोप भन्छन ! तर पोर्चुगलमा सडकमै सुतेका छन् नेपाली जनहितको लागि सक्दो सेयर गरौ
युरोप युरोप भन्छन ! तर पोर्चुगलमा सडकमै सुतेका छन् नेपाली जनहितको लागि सक्दो सेयर गरौ
मान्छे अहिले सानातिना देश नहेरि ठुला ठुला देश हेर्छन । अलिकति पढाइ सकेर युरोप तिर जाने बिचार गर्दछन । थोरै काम अनि धेरै कमाई गर्न भनेर युरोप तिर जाने सोच गरेर आफ्नो पढाइ बिचैमा छाडेर युरोप को भिसा लगाउन सुरु गर्छन । उनिहरु को सोचाइ साउदी, कतार, दुबै लगाएर गल्फ कन्ट्री मा राम्रो कमाई हुदैन काम धेरै हुन्छ भन्ने सोच ले ठूलो देश मा नै जाने गर्दछन ।
त्यसमा पनि युरोपेली देश पोर्चुगलमा आउने नेपालीको सङ्ख्या दैनिकजसो बढेको छ । उनीहरु सहजै रुपमा पाइने आवासीय अनुमति पत्र, नागरिकता र युरोपियन पासपोर्ट का कारण पोर्चुगल आउने गर्दछन् । नेपालबाट सपना बुनेर पोर्चुगल आइपुगेकाको जीवन भने कष्टकर नै छ । साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण काढेर युरोप आएका तिनै नेपाली जागिरकै लागि दिनरात भौतारिनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । पछिल्लो समय समस्यै समस्याका कारण नेपाली युवाको बास पोर्चुगलका मुख्य सडक बन्ने गरेको छ ।
उहाँका अनुसार गलत सङ्गत र धैर्य गर्न नसक्दा नेपाली युवाको वास सडकमा पुगेको हो । गलत सङ्गत र धैर्य गर्न नसक्दा नेपाली युवाको वास सडकमा पुगेको हो । ‘साथीभाइ पोर्चुगलमा यथार्थभन्दा धेरै ठूलो सपना बोकेर आउनुहुन्छ वा महत्वाकांक्षी सपना बुन्नु हुन्छ तर त्यस्तो खालको सोचाइ र सपना रातारात पूरा हुने अवस्था छैन, यहाँ मात्र होइन कहींँ गए पनि त्यस्तो हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, सडकको बास नेपाली समुदायमा निकै जटिल समस्याको रुपमा देखापरेको छ । यसको समाधान चुनौतीको रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।
कामका लागि भन्दै नेपालमा साहु महाजनसँग ऋण लिएर पोर्चुगल छिर्नेहरु काम नपाएर छटपटाउनुपर्ने विकराल समस्या पैदा भएको छ । विकृति, गलत सङ्गत, कुलत, महत्वाकांक्षा र अस्वभाविक सपना टुट्ने र फुट्ने हुँदै जीवन सडकको पेटीमा पुग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । पोर्चुगलको व्यस्त सडकमा सडक जीवन बिताइरहेका पोखरा र काठमाण्डौका दुई युवाले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा आफ्नो पीडा सुनाउनुभयो । सपना ठूलो थियो । तर सपना देख्दादेख्दै सडकमा आइपुगेको पत्तै भएन् उनीहरु भन्छन्, ‘हामी सम्पन्न परिवारमा हुर्के बढेका ।
तर आज गलत सङ्गत र कुलतकै कारण सडकछापमा परिणत भयौं । सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने र सडकमै रमाउने उनीहरु नेपाल फर्किने सोचमा भने छैनन् । घरपरिवारबाटसमेत साथ पाउन छाडेका उनीहरुले नेपाल गएर पारिवारिक स्नेह र वातावरणमा सुध्रन्छु भन्ने आशा नरहेको गुनासो गर्छन् । मनोविज्ञानका ज्ञाता पनि परिवारले आफ्ना सन्तानको ख्याल नगर्दा कुलतमा फस्ने बताउँछन् । कुलत, डिप्रेसन अस्वथ्य र बैराग भएर सडक जीवन बिताउने नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा मनोविज्ञानका जानकार राज क्षेत्रीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०३:०३